Madaxweynaha Mexico oo baajiyay booqasho uu ku tegi lahaa Maraykanka!! | kowtharmedia.com
Home WARAR Madaxweynaha Mexico oo baajiyay booqasho uu ku tegi lahaa Maraykanka!!
Madaxweynaha Mexico oo baajiyay booqasho uu ku tegi lahaa Maraykanka!!
Madaxweynaha dalka Mexico Enrique Pena Nieto ayaa joojiyay booqasho uu toddobaadka dambe ku tegi lahaa magaalada Washingon si uu u la kulmo Madaxweynaha cusub ee Maraykanka Donald Trump.
Go’aanka uu gaaray Madaxweyne Nieto ayaa ka dambeeyay kadib markii uu madaxweyne Donald Trump uu sheegay inay fiicaan lahayd in madaxweynaha Mexico uu iska baajiyo safarkaasi haddii Mexico aysan diyaar u ahayn inay bixiso lacagta lagu dhisayo darbiga xadka labada dal. Dhismaha darbiga ayaa la sheegay inay ku bixi doonto lacag gaareysa $15 bilyan.
” Haddii Mexico aysan diyaar u ahayn inay bixiso darbiga aan aadka ugu baahanahay, waxaa markaasi ila quman in madaxweynaha mexico uu baajiyo kulankii ana yeelan lahayn.”ayuu yiri Madaxweynaha cusub ee Maraykanka Trump.
Mexico ayaa sheegtay inaysan bixin doonin kharashaadka darbiga uu Donald Trump ka dhisayo xadka Mexico iyo Mareykanka.Enrique Pena Nieto oo qaranka khudbad u jeedinayay ayaa ku gacanseyray qorshaha dhismaha darbiga isagoo intaa ku daray in ”Mexico aysan aaminsanayn dhismaha darbi”.
Donald Trump ayaa horay u sheegay in Mexico ay bixin doonto qarashaadka darbiga uu qorsheynaya inuu ka dhiso xadka. Madaxweynaha Mareykanka ayaa soo saaray warqad uu ku amrayo in la billaabo dhismaha derbiga xuduudda Mexico.
Dhismaha derbiga dherirkiisu yahay 2,000 oo meyl, wuxuu ahaa mid ka mid ah ballanqaadyadii ugu muhiimsanaa ee Trump, xilligii ololaha doorashada. Donald Trump ayaa sidoo kale la filayaa inuu shaaciyo xayiraado dhanka socdaalka ah inuu saaro todobo dal oo Afrika ah iyo qaar ka mid ah dalalka Bariga dhexe.
Dukumiinti amar ah oo ka kooban sideed bog ayaa warbaahinta loo kala diray, kaas oo ku qoran yahay xayiraadda dhanka socdaalka ah. Waxaa ku qoran in madaxweyne Trump uu joojinayo muddo afar bilood ah barnaamijka qaxootiga ee Suuriya, iyo guud ahaan mashaariicda qaxootiga.
Sharciga waxaa qasab ah inay magaalooyiinka Mareykanka taageeraan si uu u dhaqangalo ayna u caawiyaan laamaha socdaalka ee dalkaas.Maadaama aysan ahayn xeer rasmi ah, qaabka dhaqan gelinta ayaa suuragal ah in lagu kala duwanaayo.
Previous PostMadaxweynaha cusub ee Gambia oo si weyn loogu soo dhoweeyay dalkiisa daawo Sawiro!! Next PostCiyaartoy Muslim ah oo shaqadiisa ku waayey sadaqo uu gaarsiin jiray dalal ay Soomaaliya ee ku jirto Sawirro!!